Mathias Pogba oo qirtay inuu sabab u ahaa ka tegitaankii Paul Pogba ee kooxda Manchester United. – Damqo
Mathias Pogba oo qirtay inuu sabab u ahaa ka tegitaankii Paul Pogba ee kooxda Manchester United.
Mathias Pogba oo ah walaalka la dhashay Paul Pogba ayaa shaaca ka qaaday inuu qayb weyn ka qaatay ka dhaqaaqistii Paul Pogba kooxda Manchester United 2012-kii.
Paul Pogba ayaa kooxda Manchester United ka dhaqaaqay 2012-kii isagoona ku biiray kooxda Juventus oo uu markii dambe ka noqday xidig laf dhabar ah kadib markii uu boos ka waayey shaxda macalin Sir Alex Ferguson oo xiligaa ahaa macalinka Red Devils.
Mathias Pogba oo kahadlaya xaalada Paul markii uu ku sugnaa kooxda Manchester United ayaa yiri “waxaan 2012-kii ku iri, Pogba waa inaad kooxdan iskaga tagtaa si uu mustaqbalkaaga u noqdo mid wanaagsan”
Mathias ayaa hadalkiisa ku daray “aniga iyo hooyadey waxaan joognay guriga Paul markii Sir Alex Ferguson iyo Patrice Evra ay u yimaadeen si ay ugu qanciyaan inuu iska sii joogo kooxda kadib markii uu go’aansaday inuu ku biiro kooxda Juventus, wuxuu ahaa ciyaaryahan kooxda koowaad kulamada qaar u safta 10 ilaa 20 daqiiqo oo
keliya, waxaan u sheegay in wax qabadkiisa ay ka sarayso inuu si amaah ah ugu ciyaaro kooxo kale”
Mathias Pogba ayaa hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay “waxaan uga digay in hadba koox amaah loogu diro sidii ay ku dhacday ciyaaryahanada qaar oo hibada leh, gaar ahaan sida Danny Welbeck iyo Tom Cleverley oo marba koox amaah loogu diri jiray, sidaa daraadeed waxaan ku iri, inkastoo aad jeceshahay kooxdan waa inaad ka tagtaa, markii aad muujiso wax qabadkaaga ayaad dib ugu soo laaban kartaa kooxda, taasina hada ayay dhacday”.
Waxaa xusid mudan in Paul Pogba oo 23 jir ah uu xagaagii dib ugu soo laabtay kooxda Unitedka lacago rikoor ah kadib markii uu wacdaro dhigay 4-tii sano oo uu ku sugnaa kooxda marwada duqda ah ee Juventus.
Previous Isku aadka rubuc dhammaadka koobka FA-ga
Next Neymar iyo Barcelona oo maxkamad la soo taagayo
Garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne oo xirmay iyo dad Bukaano ay ku jiraan oo Baladweyne ku xayiran